AHOANA NY FOMBA HANESORANA TANTERAKA NY ADOBE FLASH PLAYER - ADOBE FLASH PLAYER - 2019
Tena Adobe Flash Player
Ahoana ny fomba hanesorana tanteraka ny Adobe Flash Player amin'ny solosaina?
Na dia eo aza ny adobe endriny tamin'ny adobe tamin'ny Adobe tamin'ny 2020, ny Plug Player Plugin dia mbola ampiasaina amin'ny Internet amin'ny navigateur amin'ny aterineto mba hanolotra votoatin-dahatsary amin'ny mpampiasa, ary ny sehatra multimedia dia fototra iraisana ho an'ny rindrambaiko web. Ao amin'ny Yandex Browser malaza, ny plugin dia tafiditra ao anatiny, ary matetika dia pejy tsy misy olana ny pejy izay manana votoaty flash. Raha mitranga ny tsy fahombiazan'ny fiara, ilaina ny mahatakatra ny antony sy mampihatra ny iray amin'ireo fomba hanafoanana ny fahadisoana.
Mety misy antony marobe amin'ny tsy fahaizan'ny Flash Player ao amin'ny Yandex Browser, ary koa ny fomba hamahana ny olana. Rehefa mandinika ireo torolàlana etsy ambany ianao, dia azo atao ny manao dingana isan-kerinandro, manaraka ny tolo-kevitra tsirairay avy alohan'ny fisehoan-javatra iray izay tsy nahitana ny tsy fahombiazana sy ny fahadisoana.
Antony 1: Olana momba ny toerana
Ny fahadisoana browsera izay mitranga rehefa mijery ny votoatin'ny flash ao amin'ny tranonkala dia tsy voatery ho vokatry ny tsy fahaiza-mampiasa ny rindrambaiko na ny fitaovana elektronika ampiasain'ny rafitra. Matetika, ny votoaty multimedia dia tsy miseho mazava tsara noho ny olana ateraky ny loharanom-baovao izay misy azy. Noho izany, alohan'ny handehananao amin'ireo vahaolana kardinalin'ny olana amin'ny Flash Player ao amin'ny Yandex Browser, tokony ho azonao antoka fa tsy miasa eo amin'ny sehatra rehetra ny teknolojia rehefa manokatra pejy web.
Mba hizaha ny endriky ny rindrambaiko momba ny fanodinana flash-votoaty, ny fomba tsotra indrindra dia ny fampiasana pejy manokana hanampiana amin'ny sehatra amin'ny tranonkala ofisialin'ny Adobe, manokatra izany ao amin'ny Yandex.Browser.
Adobe Flash Player technical support page
Eto dia misy sarimihetsika filaminana manokana, izay mila mazava tsara ny fampisehoana. Raha toa ka miseho tsara ilay animation, ary misy olana eo amin'ny pejin'ny tranonkala iray hafa, dia azo lazaina fa ny loharanom-baovaon'ny rindram-baiko no manome tsiny ny famoahana ny votoaty, fa tsy amin'ny Yandex.Browser na plug-in.
Raha tsy mandeha ny animation dia mandehana amin'ireto fomba manaraka ireto mba handraisany ny Flash Player.
Antony 2: Flash Player dia tsy hita ao amin'ny rafitra.
Ny zavatra voalohany tokony hanamarinana raha hita fa misy ny fanehoana diso ny votoatin'ny pejy Internet ao amin'ny Yandex Browser dia ny fisian'ny singa ao amin'ny sehatra ao amin'ny rafitra. Azonao atao ny manafaka tsotra izao fotsiny ny Flash Player raha tsy izany.
Sokafy ny Yandex Browser
Sorito ny adiresy:
Avy eo tsindrio "Niditra" amin'ny klavier.
Ny lisitr'ireo singa fanampiny ao amin'ny browser dia tokony ahitana ny tsipika "Adobe Flash Player - Version XXX.XX.XX.X". Ny fisiany dia manondro ny fisian'ny plugin iray ao amin'ny rafitra.
Raha tsy hita ilay singa,
hametraka izany amin'ny fampiasana ny torolàlana avy amin'ilay fitaovana:
Lesona: Ahoana no fametrahana Adobe Flash Player eo amin'ny solosainao?
Satria ny Yandex Browser dia mampiasa ny Flash Version PPAPI amin'ny Flash Player, ary ny tranok'ity tranonkala ity dia natsangana teo amin'ny motera Blink nampiasaina tamin'ny Chromium, rehefa nandefasana ilay rindrambaiko fitantanana avy amin'ny tranokalan'ny Adobe, dia zava-dehibe ny fisafidianana ny dikan-teny marina amin'ny fonosana!
Antony 3: Nofoanana ny plugin
Toe-javatra iray izay napetraka ao amin'ny sehatra ny sehatra, ary ny Plug-in plug-in dia tsy miasa ao amin'ny Yandex Browser, ary miasa amin'ny ordinatera hafa, mety hanondro fa ny singa dia kilemaina amin'ny sehatry ny browser.
Mba hamahàna ilay olana, araho ny dingana mba hizaràna Flash Player ao amin'ny Yandex Browser.
Vakio bebe kokoa: Mpilalao Flash ao amin'ny Yandex Browser: manilika, manilika ary manitsy auto-update
Antony 4: Kitendry and / na Browser Version
Adobe dia mamoaka tsy tapaka ny dikan-teny fampidiran-drakitra amin'ity tranokala ity, ka mamafa ny fahombiazan'ny sehatra ary mamaha olana hafa. Ny rakitra maoderina amin'ny plugin, amin'ny antony hafa, dia mety hitarika amin'ny tsy fahafahana mampiseho flash-votoatin'ny tranonkala.
Matetika ny fanavaozana ny plug-in version of Yandex Browser dia tonga dia haingana ary dia tanterahina miaraka amin'ny fampivoarana ny navigateur, izay tsy mitaky ny fandraisana an-tserasera. Noho izany, ny fomba tsotra indrindra hahazoana ny dikan-teny farany amin'ity fanampim-panazavana ity dia ny fanavaozana ny navigateur. Ny fomba fanao dia voafaritra ao amin'ny lahatsoratra ao amin'ny rohy eto ambany, araho ny fepetra voalazan'ity torolalana ity.
Vakio bebe kokoa: Ahoana ny fanavaozana ny Yandex Browser amin'ny dikan-teny farany
Raha toa ka tsy nanjavona ny tsy fahombiazan'ny sehatr'asa multimedia rehefa vita ny fanavaozana ny Yandex. Ny navigateur dia tsara ny manamarina ny dikan 'ny plug-in ary raha ilaina dia ampifanavao izany amin'ny tanana. Mba hijery ny maha-zava-dehibe ny Flash Player version:
Sokafy ny lisitr'ireo singa ilaina amin'ny alàlan'ny fanoratanabrowser: // pluginsao amin'ny adiresy baoritra ary manindry "Niditra" amin'ny klavier.
Mariho ny laharana nomeran'ny singa napetraka. "Adobe Flash Player".
Mandehana any amin'ny tranonkala "About FlashPlayer" Adobe officiel de Adobe ary hahitanao ny isan'ireo dikan-teny misy ankehitriny avy amin'ny tabilao manokana.
Raha toa ka avoaka ny isan'ny installer plug-in ny isa azo ampiasaina ho an'ny fametrahana, dia andramo ny fanavaozana. Misy famaritana momba ny dingan'ny fanavaozana ny Flash Player amin'ny fomba ofisialy sy ny fomba fanoratana ao amin'ny fitaovana:
Lesona: Ahoana no fomba fanavaozana ny Adobe Flash Player ao amin'ny Yandex Browser?
Antony 5: Ady amin'ny plugin
Amin'ny fampiasana Windows, fametrahana matetika ny programa sy / na rafitra, mety hisy ny toe-javatra raha toa ka manana karazana plug-in roa ny plugin - OS - NPAPI - ary misy kokoa ny fitaovana maoderina toy ny PPAPI, izay miaraka amin'ny Yandex Browser. Amin'ny tranga sasantsasany, ny fifandimbiasam-pahefana, izay mitarika amin'ny tsy fahaizan'ny singa tsirairay amin'ny tranonkala ao amin'ny tranokala. Raha te-hanamarina sy hanafoana izany toe-javatra izany, dia ataovy izao manaraka izao:
Sokafy ny Yandex.Browser ary mandehana any amin'ny pejy ahitana ny lisitry ny fanampim-bokatra. Rehefa vita ny lisitra, tsindrio ny safidy "Read More".
Raha toa ka misy singa mihoatra ny iray no aseho amin'ny anarana "Adobe Flash Player", atsaharo ny voalohany ao amin'ny lisitra amin'ny tsindrio ny rohy "Disable".
Atsantohy ny navigateur ary jereo ny fonctionn'ny plugin. Raha toa ka tsy nitondra valiny ilay hetsika dia esory ny plugin faharoa ao amin'ny lisitra, ary avereno indray ilay voalohany.
Raha toa ka tsy misy valiny mahafa-po rehefa vita ny dingana telo etsy ambony dia mampifandray ireo singa izay ao anatin'ny lisitry ny fanampim-panazavana ary mandinika ireo antony hafa tsy fahombiazana rehefa mampiasa Flash Player amin'ny Yandex Browser
Antony 6: Hardware Incompatibility
Ny antony diso amin'ny fijerena ny votoatin-tserasera amin'ny tranonkala misokatra amin'ny fampiasana Yandex Browser ary ny famoronana mampiasa teknolojia Flash dia mety tsy fahombiazan'ny fiara vokatry ny tsy fitovian'ny singa sy software manokana. Mba hanafoanana ity toe-javatra ity, dia mila manafoana ny fanaparitahana an-tserasera amin'ny alàlan'ny Flash Player ianao mba hampihenana ny enta-mavesatra amin'ny fitaovana mpamorona navigateur.
Sokafy ny pejy izay misy ny votoatiny tselatra, ary tsindrio ny bokotra havanana amin'ny faritra misy ny mpilalao, izay hanangona sakafo mifandraika izay mila mifidy ny singa "Options ...".
Ao amin'ny varavarankely izay miseho "Adobe Flash Player Settings" eo amin'ny tabilao "Mapping" tsaha "Ampidino ny fiasan'ny Hardware" ary tsindrio "Close".
Atsantohy ny navigateur, atsangano ny pejy misy ny votoaty flash ary jereo raha efa voafaritra ilay olana. Raha mbola misy ny fahadisoana, tsidiho ny boaty "Ampidino ny fiasan'ny Hardware" fampiasana indray ary mampiasa fomba fitsaboana hafa.
Antony 7: Fikirakirana rindrambaiko tsy mety
Raha toa ka tsy mitondra fiovana eo amin'ny toe-draharaha ireo antony voalaza etsy ambony ireo, tokony hampihatra ny fomba lehibe indrindra ianao - ny famerenana tanteraka ny singa rindrambaiko amin'ny rafitra ampiasaina rehefa miasa miaraka amin'ny sehatra. Amboary indray ny tranokala sy ny singa Flash amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo dingana ireo:
Esory tanteraka ny Yandex.Browser, manaraka ny torolalana avy amin'ilay fitaovana eo amin'ilay rohy etsy ambany. Amporisihina ny fampiasana ny fomba faharoa voalaza ao amin'ny lahatsoratra.
Vakio bebe kokoa: Ahoana ny fomba famafana tanteraka ny Yandex Browser amin'ny solosainao?
Esory ny Adobe Flash Player raha te hanaraka ny torolalana ao amin'ny lesona:
Lesona: Manala tanteraka ny Adobe Flash Player amin'ny ordinateranao
Atsaharo ny PC.
Hametraka ny Yandex Browser. Ny fomba hanaovana izany marina dia voalaza ao amin'ny lahatsoratra ao amin'ny tranonkalanay:
Vakio bebe kokoa: Ahoana no fametrahana Yandex Browser amin'ny solosainao
Aorian'ny fandefasana ny navigateur, jereo ny fahamarinan'ny fanehoana ny votoaty flash. Ny fahombiazana dia ny dingana manaraka tsy ilaina, satria ny tranokala fanangonana dia ahitana ny versione farany amin'ny Adobe Flash Player plugin ary ny famerenana azy io dia mamaha ny olana rehetra matetika.
Jereo koa: Nahoana no tsy nandefasana Yandex
Raha toa ka tsy mamokatra valiny ny dingana efatra voalohany amin'ity boky ity, dia manapaha fonosana Flash Player azo avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny mpandrindra amin'ny alàlan'ny fanarahana ny torolàlana avy amin'ny fitaovana hita ao amin'ny rohy:
Vakio bebe kokoa: Ahoana ny fametrahana Adobe Flash Player ao amin'ny solosainao
Araka izany, aorian'ny fanarahana ireo torohevitra voalaza etsy ambony, ny olan'ny Adobe Flash Player ao amin'ny Yandex Browser dia tokony havela amin'ny lasa. Manantena izahay fa tsy hampisy olana amin'ny mpamaky intsony ny fampiasana iray amin'ireo tranonkala Internet malaza sy ny sehatra multimedia mahazatra indrindra!
https://termotools.com mg.termotools.com © Adobe Flash Player 2019